केसीको पक्षमा जाग्यो कर्णालीको नागरिक समूह
सुर्खेत- कर्णालीको नागरिक समाज चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखी अनसरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको पक्षमा उभिएको छ । जुम्लाबाट केसीलाई जबर्जस्त काठमाडौं लैजादा समेत मौन रहेको नागरिक सरोकार समूह २६ दिनपछि जागेको हो ।
जुम्लामा रहदा केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदासमेत मौन रहेको समूह अन्तिम समयमा उनको पक्षमा उभिएको छ । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समूहले केसीले उठाएका मागहरु तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।
नागरिक समूहका अगुवा गेहेन्द्रप्रसाद दहालले केसीले उठाएका माग सम्पूर्ण नेपाली जनताका मागहरु भएको भन्दै सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । दहालले भने 'डा. केसीले उठाएका माग कुनै दल र व्यक्तिका होइन, उनका माग समग्र नेपाली जनताका मागहरु हुन् ।' उनले थपे 'केसीलाई कुनै दलसँग जोडेर सरकार पन्छिन खोजेको छ ।'
त्यस्तै अर्का नागरिक समूहका अगुवा एवम् बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको अन्त्य र जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि पनि केसीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने 'च्याउजस्तै उम्रिएका मेडिकल कलेजले आज गुणस्तर कायम राख्न सकेका छैनन् ।' सरकार तिनै दलालहरुको फन्दामा परेर केसीका माग सम्बोधन गर्न हिचकिचाइरहेको उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै अर्का अगुवा कविराम पुरीले स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई सरकारले बन्चित गर्न खोजेको आरोप लगाए । पुरीले भने 'सरकारले केसीका मागलाई सम्बोधन नगरेर जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई बन्चित गर्न खोज्दै छ ।'
कर्णाली जस्तो विकास क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पुहँच पुर्‍याउन र डा. केसीको जीवन रक्षाको लागि समेत सरकारले तत्काल केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको पुरीले जिकिर गरे । नागरिक सरोकार समूह कर्णाली प्रदेशले तत्काल माग सम्बोधन नभएर थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने समेत बताएको छ ।